China LCD ihuenyo vidiyo broshuọ ọla ọla olu nkwakọ ngwaahịa onyinye kaadị ekele na rụpụta na ụlọ ọrụ | VideoBrochure
Mpempe akwụkwọ LCD vidiyo foto ọla ọla olu nkwakọ onyinye kaadị ekele
Video Broshọ kaadị bụ a pụrụ iche kaadị na ị nwere ike bulite gị onwe gị video, music ma ọ bụ foto site na kọmputa. Ọ ga-egwu na akpaghị aka mgbe ị mepere kaadị, ma kwụsị ga-emechi kaadị ahụ.
Broshọ LCD Video bụ onyinye ama ama ama maka ekeresimesi, ụbọchị ọmụmụ, agbamakwụkwọ, afọ ọhụrụ, ụbọchị Valentine, Onyinye Azụmaahịa, Mgbasa Ozi, wdg.
Ihe Ahaziri 7 Inch LCD Screen Akwụkwọ nta Video kaadị Kaadị Business Nkwado Broshọ
Ihe onwunwe Akwụkwọ edere kaadị ekele + LCD + ebe nchekwa + ọkà okwu + batrị + USB Port
LCD TFT LCD Nha 7 anụ ọhịa
Mkpebi 800 * 480P
Nha kaadị A5 / A4 ma ọ bụ ahaziri size
PCB Nchekwa 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8G.
Akwụkwọ kaadị Mpaghara ngosi 153 * 85MM
Mbipụta maka imepụta ọtụtụ ihe Agba agba zuru ezu
Akwụkwọ kaadị 300g ntekwasa art akwụkwọ
Wuru na-batrị 250-2000mAh 1-2 awa video egwu oge
Ọkà okwu 8Ω2w Ezigbo ọkà okwu
Igwu ọdịnaya vidiyo MP4, AVI, 3GP, MOV ma ọ bụ ndị ọzọ
Rụọ ọrụ Ntughari ndọta Mepee kaadị, vidiyo vidiyo; vidiyo na-akwụsị mgbe emechiri
On / anya ebighị Pịa / gbanyụọ bọtịnụ iji kpọọ vidiyo; Pịa bọtịnụ / ngbanye ọzọ iji gbanyụọ vidiyo
Nhọrọ bọtịnụ Igodo vidiyo na-esote Igodo vidiyo gara aga
Olu elu Mpịakọta nke ala button
Kpọọ / kwusi bọtịnụ Ọ bụla video bọtịnụ
Ọrụ bọtịnụ ahaziri ndị ọzọ bụ nhọrọ
Ngwa Micro USB eriri
Maka nbudata vidiyo na fanye batrị lithium
Izi ezi ozi:
7 Inch TFT LCD ihuenyo 152mm * 85mm 16: 9 800 * 480 1200mA ~ 24000mA > = 2hour
7 Inch HD ihuenyo 152mm * 85mm 16: 9 1024 * 600 1200mA ~ 24000mA > = 2hour
7 Inch IPS ihuenyo 152mm * 85mm 16: 9 1024 * 600 1200mA ~ 24000mA > = 2hour
10 Inch HD ihuenyo 221mm * 124mm 16: 9 1024 * 600 1500MA ~ 24000mA > = 2hour
10 Inch ips ihuenyo 221mm * 124mm 16: 9 1024 * 600 1500MA ~ 24000mA > = 2hour
Kaadị vidiyo na-ajụ ajụjụ
Q. Kedu ụdị ihe na ibipụta akwụkwọ nhọrọ maka broshuọ vidiyo?
Standardkpụrụ ahụ bụ akwụkwọ akụkọ 350g nwere mbipụta 4C. A na-anabata ihe ndị ọzọ na usoro obibi akwụkwọ na arịrịọ gị. Ihe: 157g, 2500g hadcover, akpụkpọ anụ, ịkwanyere wdg Printing usoro: Embossing & Embossing & osise, UV, na-ekpo ọkụ stamping, ntụpọ agba obibi, abụọ-kwadoro obibi, wdg
Q. Kedu akụkụ nke kaadị ekele vidiyo?
Nha kachasị maka broshuọ vidiyo bụ A5 (148 * 210 * 10 mm), A4 (210 * 297 * 10 mm). Ndị ọzọ ahaziri nha nwekwara dị.
Q. Kedu usoro (ntinye faịlụ) chọrọ maka ikpeazụ nka / imewe?
Usoro nhazi ga-abụ AI, PSD, CDR ma ọ bụ PDF.
Q. Olee ụdị mgba ọkụ bụ nhọrọ?
Standard mgba ọkụ maka broshuọ vidiyo bụ ndọta magnet. Nhọrọ ndị ọzọ bụ ihe mmetụta ọkụ, ihe mmetụta ntụgharị, ntụgharị usoro, bọtịnụ push, wdg.
Q. Enwere ike igbachi ma ọ bụ zoo faịlụ vidiyo?Yabụ ndị ọzọ enweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ hichapụ vidiyo.
Ee, anyị nwere ike ịtọ paswọọdụ ma ọ bụ zoo vidiyo vidiyo na arịrịọ gị
* Nlụpụta na mbupụ eletrọniki ngwaahịa kemgbe 2010, nwere ike idozi ụdị nsogbu niile.
* Nwere onwe anyị, ga-eme ka ị mara ihe ọhụụ kachasị ọhụrụ.
Nwee ndi oru ike nke anyi nwere ikike izute ndi ahia nke oma.Aa
* Pụrụ ịdabere na obi ike na 100% QC tupu Mbupu.
* Akwụkwọ ikike afọ 1 maka ngwaahịa ndị nwere ezigbo ọrụ ahịa.
Q: gịnị bụ mbupu okwu na nnyefe oge nke ụlọ ọrụ gị?
A: Ọfọn, ha dabere na ọnụọgụ iwu gị.Kama ị maara, anyị kwesịrị oge iji rụpụta ngwaahịa ahụ, oge Mbupu bụ 3-7 ụbọchị ọrụ mgbe nnyefe. Maka ụzọ nzipu, maka ihe nlele na nnukwu iwu <100KG, anyị ga-egosi gị nke ọmaExpress na Ibu ụgbọ, mgbe Ibu ikuku na mbufe Oké Osimiri maka iwu Bulk> 100KG. Dị ka ọnụ ahịa zuru ezu, ọ dabere na usoro ikpeazụ gị.
Q: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ gị na-anabata?
A: Anyị na-anabata T / T, 30% -50% nkwụnye ego n'ọdịnihu, itule doro anya tupu bulie ma ọ bụ Mbupu.
Q: Enwere m ike ịnweta ụfọdụ nlele?
A: A na-anabata usoro iwu.
A ga-atụle ọnụahịa dabere na ọnụ ọgụgụ buru ibu.
Nke gara aga: ASS ahaziri 10 anụ ọhịa ọkọlọtọ video katalọgụ broshuọ kaadị azụmahịa ọrụ n'akpa uwe ọrụ maka mgbasa ozi azụmahịa
Osote: F9 Tws 5.0 Ezi Ikuku HIFI Stereo Headset Earbuds Lcd Digital Electric Quantity Waterproof Noise Mbelata Bluetooth Earphone
Factory Omenala video ebipụta lcd 5inch video g ...
Ahaziri Size Rechargeable Batrị LCD Video ...
Airbiotics A5 Azụ siri ike Digital Book / Lcd Bookle ...
4,3 inch LCD ihuenyo copule nkwalite okomoko gif ...